Chọpụta ihe nkpuchi ntutu isi 6 maka mmiri a | Bezzia
Susana Garcia | 29/04/2021 20:00 | Mma, Mma ọgwụgwọ
El nlekọta ntutu bụ isi na anyị ga-eburu n'uche kwa ụbọchị. Ga-ejirịrị ngwaahịa dị mma oge niile mana anyị nwekwara ike iji nnukwu ntutu isi site n'oge ruo n'oge, n'ihi na ụzọ ahụ anyị ga-agbakwunye ntutu anyị ụfọdụ. N'oge opupu ihe ubi a, anyị nwere ike ịme ntutu dị mma ma maa mma, na-egbuke egbuke ma dị mma ma ọ bụrụ na anyị ejiri ihe nkpuchi nke zuru oke maka ntutu anyị.
na ihe nkpuchi ntutu ga-eme ka ntutu gị dịkwuo mma na site na ịhọrọ ihe ndị mejupụtara Ya mere, anyị nwere ike iburu n'uche ndị kachasị mma maka ụdị ntutu anyị. Ihe nkpuchi ndi ozo anyi nwere ike ime n'ime ulo di oke nma, n'ihi na anyi jiri ihe ndi ozo na n'otu oge anyi ji edozi ntutu isi site na ihe di mfe.
1 Nkpuchi ntutu isi Frizzy
2 Ihe nkpuchi ntutu maka ntutu isi
3 Mmanu mmanu ntutu
4 Nkpuchi maka ntutu dị mma
5 Dull nkpuchi ntutu
6 Nkpuchi maka ntutu isi
Nkpuchi ntutu isi Frizzy
El frizzy ntutu na-enwekarị nsogbu nke nkụ, ya mere, isi ihe dị na nke a bụ ịzụ ntutu. Ube oyibo na-abụkarị nnukwu mgwa maka nke a. Ya mere, anyị ga-ahụ ube oyibo chara acha nke anyị nwere ike ịmị iji na ntutu. A na-etinye ube oyibo a na oliv ma ọ bụ mmanụ almọnd nke na-edozi ahụ iji kpochapụ frizz. Mgbe itinye ihe nkpuchi ahụ, anyị ga-asacha ntutu na ncha ntutu dị mma mana anyị ga-ahụ otu frizz ga-esi pụọ ma ọ bụrụ na ọ dị mma.
Ihe nkpuchi ntutu maka ntutu isi
Akọrọ ntutu nwekwara ike ịbụ erite uru site na ihe na-enye oke hydration. Mmanụ oyibo a gwakọtara na akwa ọcha dị mma. Aki oyibo na-edozi mmiri ma akwa ọcha dị mfe mana ọ na-enyere aka mee ka ntutu dị mmiri mmiri, nke mere na n'ikpeazụ, ntutu na-edozi ma kwụsị ịkpọ nkụ.
Mmanu mmanu ntutu
Ihe eji eme ụlọ maka ntutu mmanụ na-abụkarị na-eji ihe ọ juiceụ lemonụ lemon mgbe niile, ebe ọ nwere ike astringent dị elu. Nwere ike ịgwakọta lemon na akwa ọcha, nke bụ ihe ọkụ ọkụ na-agbakwunye ncha. Na ntutu mmanụ, anyị enweghị ike iji ihe ndị na-enye abụba karịa mmanụ oliv, mana enwere ike ịgwakọta ya na yogọt nke na enye ume ma ọ bụghị mmanu. Mee nkpuchi wee hapụ ọkara awa. Mgbe ahụ, a ga-asacha ntutu mgbe niile. Lemọn na-enyere aka ịhazi mmepụta abụba na ịdị nro.
Nkpuchi maka ntutu dị mma
na strawberries bụ mkpụrụ osisi zuru oke maka ntutu isi na-enweghị ike. Masks maka ntutu dị mma ga-enye ike na olu. Jiri mkpịsị osisi nke nwere ike gwepịa iji mee mado nke anyị na-etinye ọka. Strawberries tinye ike na ntutu na ntụ ọka na-agbakwunye olu.
Dull nkpuchi ntutu
El dull ntutu nwere ike ịbụ akọrọ na frizzy, ebe ọ bụ na ihe ọ bụla metụtara eriri nke nwere ike imebi. Ọ dị mkpa ịzụlite ntutu gị na nro dị nro site na ngwaahịa na-enyere ya aka ka mma. Maka ntutu iji nwee enwu, anyị ga-agbakwunye nkochi ime akwa na nkpuchi. Akwa na-enyere aka inweta ọtụtụ nchara na eriri ntutu. N'aka nke ọzọ, anyị nwere ike ịgwakọta nkochi ime akwa na yogọt, ebe yogọt na-edozi ahụ nke ukwuu maka ntutu isi ma na-enyere ya aka ịnọgide na-enwe hydration. Na mgbakwunye, ha bụ ihe abụọ dị na kichin dị mfe ma na-agwakọta nke ukwuu iji tinye ya na ntutu.
Nkpuchi maka ntutu isi
Isi awọ nwere nsogbu dị ukwuu na ọ bụ nkụ ma mgbe ụfọdụ ọ na-emebi. Na oliv bụ ihe dị ukwuu na kwa eke okike adighi adighi adota agba. Nwere ike ịgbakwunye ụfọdụ nkochi ime akwa iji zụọ ntutu ma mee ka ọ na-enwu gbaa ma dị nro.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Mma » 6 nkpuchi ntutu maka oge opupu ihe ubi a
Ọnọdụ ọhụrụ sitere na Purificación García maka oge ọkọchị